The "Halfway" - A Self-vakadengezera sikuta tora iwe pariri - Jomo Technology Co., Ltd
The "Halfway" - A Self-vakadengezera sikuta tora iwe pariri
This Koowheel Electric nokuzvidzora vakadengezera sikuta E1 ndiyo chiedza asi akasimba, bvumidzwa Innovative mufashoni inotonhorera design, akatungamirira vanoratidza chidzitiro zvachose anoratidza bhatiri uye nokukurumidza, Super kuvhunduka Absorção de Água pamwe 8inch rabha pneumatic tai. Kunze, akapeta uye kutakura nyore. Zvisinei, izvozvo zvinogona kupa akafanana simba uye kutsiga sezvo zvinowanikwa pamwe akakwirira-kumugumo nokuriita. Extendable hunde, zvakanaka zvose vana uye vakuru.
Uyezve, mumwe yakanakisisa yemagetsi skateboard chaizvoizvo dzakawedzerwa pamwe zvakafanira mari saka kuti kumhanya zvakasimba jira refu yokuparadzana uye anofanira kuva akakodzera akatasva mawere zvakare. The vakurumidze kufamba dzinosiyana, zvisinei kunogona kusvika Max nokukurumidza 42? Km paawa.
Kana uchida kutenga chinhu yemagetsi sikuta rinodyiwa kwako nomumwe, ichi E1 anogona kuva zvechokwadi mari uye ruzivo unobatsira iwe munhu nevadiwa vako. Pasinei zvizhinji muri kubhadhara, kwava zvisinganzwisiswi kusangana kuti moto njodzi mhando Anovandira (kana asingadi vanovanda) mukati chero sikuta. Naizvozvo, pazasi rinorema mvura, zviri akangwara chete remba, uye chengeta kure puddles. Zvisinei hunofananidzwa huvandudzike puranga, kuti E1 ane chaizvoizvo inofadza zviripo Tag nokuti kuti zvinhu - hapana zvokuwedzera, hapana zvishoma. Mabhasikoro anoshandiswa kwete kuzvivaraidza zvinangwa zvisinei kuti pakufamba kuenda kwaaishanda - kushanda, kusvikira Grocery retailer, chii wakambozvibvunzawo. I kudhonza pamusoro uye une zvikuru anenge-madokero kuita mutserendende muchando. Wokutanga uchibudisa zvokushamiswa kumhanya 16mph, nepo yokupedzisira anogona kukwira 22kmh. Unogona kuva yokuti kumhanya miganhu duku Harley.
Post nguva: Apr-20-2018